Wax walba oo aad dooneyso in aad ka oggaato sababtii baajisay in uu furmo Kalfadhiga Baarlamaanka – Kalfadhi
Wax walba oo aad dooneyso in aad ka oggaato sababtii baajisay in uu furmo Kalfadhiga Baarlamaanka
Kalfadhiga 6-aad ee golaha shacabka ee Baarlamaanka dowladda Federaalka ee Soomaaliya, oo lagu waday in uu furmo 27-kii bishan Sept, ayaa dib-u-dhac uu ku yimid.
27-ka bisha, waxaa ay ku beegneyd, maalin jimca ah, inkastoo maalin fasax oo nasiido ay aheyd Jimcaha, haddana shalay oo Sabti aheyd ma uusan furmin shirka. Arrintan ayaa waxaa ka dhashay guux dad-weyne, maadaama aan lasii oggeysiinin baaqashada kullanka.
Xeer-hoosaadka Baarlamaanka ayaa dhigayaa in mudanayaasha Baarlamaanka ay leeyihiin afar-bilood oo shaqa ah iyo laba-bilood oo fasaxa ah.
Guddiga joogtada ee Baarlamaanka iyo guddoonka, ayaa waxaa ay ku habooneyd, in ay shegeen haddii kullanka uu dib-u-dhacay iyo inkale, ayuu yiri xildhanaan Prof Dhalxa.
Waa maxay sababta ugu weyn ee kulanka baajisay?
Qaar kamid ah xildhibaannada Baarlamaanka, ayaa waxaa ay ku kala maqanyihiin deegaan-doorashadooda, waxaa sidoo kale jira xildhibaanno dhowr ah oo ku maqan deegaannada Galmudug oo dhawaan ay ka dhici doonto doorasho iyo xidhibaanno ku maqan magaalada Kismaayo, oo iyana xiisado siyaasadeed ay ka taagantahay.
Xafiiska Kalfadhi, ayaa sidoo kale oggaaday in xildhibaanno kale ay wali ku maqanyihiin dalka dibadiisa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waajibkiisa dastuuriga ah ay tahay in uu furo kalfadhiyada Baarlamaanka, ayaa dalka dibadiisa ku maqan, waxaana uu ka qeyb-gallayaa fadhiga 74aad ee Shirweynaha Qaramada Midoobay.
Goorma ayaa la filayaa in uu furmo kulanka?
Inkasta oo furmida kullanka ay ku xirantahay imaanshaha madaxweyne Farmaajo, oo dalka dibadadiisa ku maqan, haddana tifaftirayaasha Kalfadhi ayaa oggaaday in kulanka uu furmi doono 6 ama 7 bisha soo socota.
Madaxweyne Farmaajo ayaa 27-kii bishii March ee sanadkan 2019, isaga oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ah si rasmi ah u furay kalfadhigga shanaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamuud Diiriye oo ka hadlay saameynta xayiraada-duullimaad ee Jubaland
Xildhibaan Dhalxa “Sharci ma ahan in ciidanka ilaalada ah laga-wareejiyo xildhibaannada”